LOBIVIA - CACTUS, QAABABKA, DARYEELKA SAXDA AH IYO SAWIR - SOOSAARKA DALAGGA
Qurxinta quruxda badan ee ubaxa caleenta Lobivia
Lobivia ama Laatiin Lobivia - waa wakiil ka tirsan qoyska cacti, horeba in ka badan 100 sano ku koray ubaxyada beeraha.
Cudurka uu yahay mid aad u ballaadhan iyo sida ilo kala duwan ay leedahay laga bilaabo 70 ilaa 140 noocsii koraya Peru, Bolivia iyo Argentina.
Lobivia waa qaraabada ugu dhow ee cakta Echinopsis. Maahan wax khasaare ah in buugag tixraac ah oo gaar ah oo badan oo noocyada kala duwan ay yihiin noocyada noocaan ah.
Foomku waa Qalabyada caadiga ah ee leh qulqulka ama cylindrical stem. Faashadaha badankooda waxaa lagu soo koobay. Inta badan waxay u qeybsamaan qaybo, iyagoo ku yaal hoolalka ay ka mid yihiin kuwa la yiraahdo waxay ku yaallaan xirmooyinka dhuuban oo lakab ah.
Lobivia waxay samaysaa tiro badan oo ah geedi socodka asaasiga ah, oo abuuraya iskudubarid oo dhan oo ah "carruurta" oo markaa wax lagu dhufto. Laba ama seddex xilli, iyada iyo qoyskeeda waxay ku noolaan karaan meel bannaan oo dhan ee dheriga ah.
Blooms-funaanad-qaabeeya ubaxyo badan jaale, caddaan, guduud, casaan, carmine midabka.
Isticmaalaya nambarro badan oo ku jira muraayado dhalaalaya oo dhalaalaya ayaa iyaga siinaya wax gaar ah. Iyada oo loo marayo dadaalka beeraleyda, noocyo kala duwan oo noocyo ah ayaa la sameeyay. "qurux baraf" oo leh palette midabka asalka ah.
Lobistaani wuxuu loola jeedaa cacti cidla ah. Waxaa ka mid ah shayada badan ee xiisaha leh, kuwaas oo, waxyaabo kale, waxaa lagu kori karaa xaaladaha guri dabaq ah.
Akhri qoraallo faahfaahsan oo ku saabsan sida: Ailoster, Cereus iyo Parody.
Bakebergahaddii kale, backbergii Lobivia waa noocyo cameemo leh dusha sare ee birta ah, dhexroorka oo aan ka badnayn 5 cm, iyo ubaxyo qurux badan. Tirada ugu badan ee feeraha waa 15, dhererkeeduna maaha mid aan qallafsaneyn oo ah 0.5 ilaa 5 cm.
Gubasho, Laateliana Lobivia tiegeliana waa noocyo kala duwan oo leh feeraha ballaadhan oo ballaadhan, tirada 18, iyo dhexroorkuna waa 6cm. Isku-buufinta waxay qaadataa ilaa 20 cirbid aan ka badnayn 1 sm dheer. Calaamaduhu waa noocyo kala duwan oo casaan ah-casaan ah oo ubax yar yar.
Bolivianhaddii kale, Livivia boliviensis waa qaab cylindrical ah oo midab leh oo cagaaran-cagaaran, qiyaastii 10 cm oo dheer oo leh weelal dheer oo isku dhafan. Dhexdhexaad oo casaan leh oo leh buro dhexe oo caleen ah - 4 cm.
Denspisin ama Lobivia densispina - noocyo ka kooban dhowr xabbadood oo kala duwan, oo ku kala duwan cabbirka iyo muuqaalka afkoda, qodxaha, iyo midabka ubaxa, kuwaas oo lagu gartaa xajmiga ballaaran iyo midabada dhalaalaya.
Zhazhoyana ama Yayoana, haddii kale Lobivia jajoiana waa noocyo yaryar oo leh muraayad guud oo leh wareegsanaan aan ka badnayn 10 cm. Waxaa lagu kala gartaa tubercles si weyn loo yaqaan. Dhererka cirbadaha yar-yar ee cirbadaha casriga ah laga bilaabo 0.8 illaa 1 cmiyo bunni bartamaha - 2-2.5 cm. Ubaxyada xayawaanku waa kuwo aad u qurux badan - casaan huruud ah ama casaan leh xarun guduudan iyo waxyaabo farabadan oo kala duwan.
Golden jaalle ama Lobivia aurea - Dheji silsilad ah oo leh ubaxyo dhaadheer oo dheer oo ah midab dahabi ah oo jaale ah oo ku yaalla baraha xajka ah ee loo yaqaan "silvery silvery pedicels".
Cinnabar Redin Latin, Cinnabarina Lobivia waa miisaan qafiif ah oo qumman oo qiyaastii ah 15 cm ee wareegga leh ubaxyo carmine aad u muuqda. Cirbadaha Brown waa mid aad u adag oo gaaraya 8 cm dhererka.
Webka caarada (spiderweb), haddii kale Lobivia arachnacantha waa qaab yar oo wareeg ah oo wareeg ah oo ah wareegga 4 cm oo keliya oo leh caarada la riixo gudaha. Ubaxyada ayaa lagu rinjiyeeyaa midabyo jaale-cad ah oo leh dhaldhalaal dhalaalaya.
White-violethaddii kale, leucoviolacea Lobivia waa xayawaan xiiso leh, waxoogaa yar oo ballaaran. Cirbadaha iftiinka muddada dheer waxay daboolaan dusha. Midab of ubax casaan leh hooska a violet.
Famatymskaya, ee Lobivia Latatimensis - muuqaalkan cylindrical waxaa lagu gartaa jaangooyo fiiqan oo ah qiyaas ahaan ilaa 24 gogo '. Meelo gaaban oo xoog leh cadaadiska feeraha iyo ku dhawaad ​​aan la qiyaasi karin. Ubaxaha hooska jaalaha ah waxay leeyihiin dhexroor qiyaastii 6 cm.
Hertiga ama Hertrich, haddii kale Lobivia hertrichiana - aragtida yaryar oo yar, oo ku yaal 11 fiinlood oo raxan. Cabbirta lafdhabarta ayaa ah 1.5 cm, irbadda dhexe waa midka ugu dheer oo kaliya. Waa midab huruud ah, cabirkeedu waa 2.5 cm, ubaxa cas waxaa lagu qurxiyaa xarun qurux badan.
Pentland, ee Laatiinka Lobivia pentlandii - qaab yar oo qaabaysan oo qumman. Cirbadaha inta badan maqan. Dhererka caanaha casaanka ah ee casaan ama dhalaalaya wuxuu ku dhowaad 6 cm.
Reita (Haage)haddii kale, Lobivia haageana waa xabbad ballaadhan oo ballaaran oo leh stem engulfing ah oo gaareysa 30 cm oo dherer ah. Dhererka cirbadaha yar-yar ee mugdiga ah waa 2-3 cm, iyo kuwa dhexe waxay yihiin 6-7 cm.
Schreiter, ee Laatiinka, Lobivia schreiteri - waxaa lagu kala soocaa asliga ah oo ka kooban qayb ka mid ah "madaxa madaxyada" oo leh dhexroor aan ka badnayn 3 cm, daboolay dabaylo yar yar. Midabka ubaxa yaryar ayaa casaan ku leh cunaha madow.
Lobivia daryeel aan qabyo ahayn, qorrax-jecel iyo sababa. Waxyaabaha ugu adkaa ee Lobie sii kordhaya waa in ay ku siiso xaaladaha ubax.
Si taas loo sameeyo, waxaa muhiim ah in si adag loo ilaaliyo heerkulka, ilaalinta iftiin ku filan oo biyo ah.
Ma ogtahay in sida cakta sida Opuntia ay tahay mid xiiso leh maaha oo kaliya muuqaalkiisa, laakiin sidoo kale waxay keenaysaa faa'iidooyin badan oo bini aadamka ah?
Ka akhriso boggayaga internetka. Sidoo kale waxaad ogaataa nooca Opuntia ee jira iyo sidaad si habboon u daryeeli lahayd warshadan cajiibka ah.
Lobivia waa leexdo weyn oo qorrax leh.
Doorashada ugu fiican ee meelaynta waxay noqon kartaa oo keliya xannibaadda koonfureed ee koonfurta.
Iyada oo iftiiminta iftiinka, asliga ah waa la bedelay, cirbadaha ayaa dhacaya. Qolku waa inuu noqdaa mid si joogto ah u hawoqonaya - waa hooyo ka mid ah meelaha qotada dheer, waxay u baahan tahay socod joogto ah oo hawo nadiif ah.
Waxay qurux badan tahay waxay u dulqaadanaysaa heerkulka xagaaga ee waddanka Ruushka. Si kastaba ha ahaatee, waqti isku mid ah, daganayaasha buuraha waxay u baahan yihiin inay kala duwanaato heer kulka iyo habeenkaba.
Sidaa darteed, xilli ciyaareedka diiran, waxaa ugu wanaagsan in loo gudbiyo veranda ama balakoonka, ama prikopat wadajir dheriga beerta meel meel looga ilaaliyo roobka.
Xilliga jiilaalka, xabbadgu wuxuu yimaadaa nasasho. Dabayaaqadii Noofembar, waxaa loo wareejinayaa dhismaha heerkulka 8 ilaa 10 ° C.
Iyadoo aan qaboojin qabow, Lobivia diidi doonaa in ay ubaxyada, sababtoo ah waa qaboojin ah oo ka qaybqaataa abuuritaanka ubbooyin ubax.
Biyaha warshaduhu waa inay si taxadar leh u sugaan, sugaan ciidda si ay ugu qalajiyaan dheriga. Waa muhiim inaanad buuxin.
Nadaafka qoyaanka waa mid halis ah isaga oo u horseedi kara jebin stem.
Waraabinta bilaabmaa guga, ka dib markii ubbooyinku u muuqdaan.
Bartamihii July, cabitaanku wuxuu joogsadaa muddo bil ah, ka dibna wuxuu dib u bilaabayaa qaybta labaad ee bisha Agoosto.
Tirada ugu dambeysa Joojinta waraabinta bisha November si buuxda oo loo wareejiyo meel qabow ah jiilaalka.
Lobivia waxay leedahay sharaf aan la loodin karin - ma aha dalbasho qoyaan, ganaax qaadaa hawo qalalan dhismaha oo uma baahna buufinta. Waxaa lagama maarmaan ah in marmar nadiifiyo boodhka iyadoo la isticmaalayo buufin yar.
Waxaa lagu talinayaa in lagu quudiyo laba jeer bishiiba oo ah bacriminta for cacti laga bilaabo Maarso ilaa Sibtember inta lagu jiro koritaanka firfircoon iyo ubax.
Inta lagu jiro xilliga nasashada bacrimiya ma aha mid macquul ah.
Guga dhamaadka jiilaalka ee lobivii bilaabi saarista burooyinkeeda ubax.
Waqtigaan, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u kormeerto iyo marka buro soo baxaan, isla markiiba u wareeji qol dhalaalaya oo dib u bilaabo waraabinta.
Warshadu waxay bilaabmaysaa in ay Bloom May. Ubax kasta wuxuu ku nool yahay 1 ilaa 3 maalmood. Waxaa xiiso leh, waaberiga, wuu kala diraa, oo wuxuu xidhaa fiidkii.
Mar mar ayaa u muuqda ilaa 25 ubaxtaasi waa aragti aan caadi ahayn.
Qalabeynta iyo ka kooban ciidda
Lobistaanku wuxuu u baahan yahay dhul dabacsan, oo la gari karo oo leh pH ah 5.6. Waxaad iibsan kartaa iskudhaf diyaar ah oo loogu talagalay cacti ama diyaarinta ciidda naftaada.
Si tan loo sameeyo, qaado:
4 xabbo oo caano ah;
3 qaybood oo ah dhul caleen ah iyo ciid qalafsan;
2 qaybood oo ah peat.
Lagu shubay sanadkiiba mar dherar ballaaran oo ballaaran leh godadka dheecaan leh iyo lakab ku filan oo qumman ee hoose.
MUHIIM: kakooban ayaa laga soocaa qalalan ilaa ciidda qallalan.
Qalitaanka ka dib, waxaa la dhigaa meel gudcur ah maalmo badan, waxaana lagu waraabin karaa oo kaliya toddobaadkii ka dib.
Noocyada daryeelka kadib iibsashada
Inta badan, Lobivia waxay ka soo gashaa gurigaaga dukaanka ubaxa.
Taas waxay ku guulaysatay xaaladaha cusub waxaad u baahan tahay inaad ku bedesho dhul cusub, oo horey loo baaray cayayaanka iyo cudurada suurtogalka ah.
Si kastaba ha noqotee, dib u noqosho laguma talinayo isla markiiba. Waa lagama maarmaan in la iibsado kadib wuxuu ku qaatay toban maalmood karantiil.
Inta lagu jiro waqtigan, dhulka dushiisa ayaa si fiican u qalaji doona, lana yareeyo xaalado cusub.
Markaad transplanting, waa inaad si taxadar leh u ruxaysaa xabbad ka baxda dheriga, eeg oo soo ogow haddii cayayaanka ay ku degeen. Caleemaha qalalan iyo waxyeelo waa in la gooyaa.
Haddii astaamaha ay waxyeeleeyeen waxyeelo, waxaad u baahan tahay inaad gooyso meesha ay saameysey oo ay ku rusheeyeen boogta leh dhuxul firfircoon.
Markaa waxaad ka iibsan kartaa Lobivia biyo kulul leh heerkul ah qiyaastii 50 ° C iyadoo lagu darayo fungicide iyo cayayaanka.
Nidaamkani waa ka hortagga cayayaanka. Intaa waxaa dheer, waxay kicinaysaa koritaanka warshadda. Ka dib markaad kuleylid, xabbad waa in la qalajiyaa. 3 ama 4 maalmood gudahoodadigoo ku dhejinaya meel qumman oo toosan oo xididdada.
Ka dib markii dhirta la qalajiyo, waxaad u baahan tahay u beddel dhulka cusub oo ku siiya dhammaan xaaladaha lagama maarmaanka ahkor ku xusan.
"Kids". Habka ugu horreeya waa midka ugu fudud, laakiin waxa fiican inaad u isticmaasho si aan caadi aheyn, marxaladdana waa la faafin karaa abuurka.
Haddii kale, cacawada si dhakhso ah ayuu u degaa ka soo goynta joogto ah ee caleemaha lateral.
Guga ama xagaaga hore, kala tag "ilmaha", siiso meesha jajabinta ama jarida xoogaa qalalan iyo xoojinta jarida qoyaanka qoyan ama carrada.
Haddii aad horay u xoqdo gooyo qalin qori ah, sicirka badbaadada ayaa kordhi doona. Wixii fayoobi ah waxaa lagula talinayaa inay doortaan caleemo caafimaad leh oo adag, sida dusha dhalada.
Seeds. Si aad u biqilka ka fiican, ma dhaawacaan in ay qoyaan miraha biyo diiran maalin ka hor beero, kaas oo dhowr kristaan ​​oo ka mid ah permiranate waa la kala diraa. Kadibna waa inay qallajiyaan.
Seeds lagu beeray habka dusha sare. - waa in si siman loo qaybiyaa dhul khafiif ah, oo ku qoyan qori rasaas ah kuna dabool daboolka ama bac dahab ah.
Ma aha oo kaliya Lobivia waa la faafin karaa by abuur. Si la mid ah, waxaad jilcan kartaa noocyada kale ee cacti.
Akhri wax ku saabsan maqaaladayada ku saabsan Ferocactus, Mammily iyo Dib-u-Celinta.
Cadaadiska khatarta ah ee Lobivia waa:
Haddii dhirta ay ka timaaddo hawo qalalan, qaniinyo caaro ayaa weerari kara. Wuxuu dareemayaa dhibco madow oo ku yaala asliga ah iyo xargaha.
Walxaha kiimikada sida "Fitoverm", "Neoron" ama "Agrivertin", ama dabiiciga ah - decoction of yarrow, faleebo basasha ama toon.
Gacanta ama casaan ayaa laga saaraa burush, ka dib markaa dhirta loo xaaqay dhowr saacadood kadibna la dhaqay.
Haddii weeraray aphid, waxaad u baahan tahay inaad burburiso cayayaanka oo ku dhaq saabuun leh saabuun, iyo haddii ay dhacdo in daawooyinka infekshanka jirku uu ku caawin doono: "Actellic", "Fitoverm", "Duufaan".
Haddii ay dhacdo waraabin xad dhaaf ah, waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo stem rottaas oo lagu sheego xakameynta lakabka leh ee la isku qurxiyo.
Waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo qaybta xanuunka, geedi socodka gooyo dhuxul ama fungicide iyo dhowr toddobaad oo farsamo ah ma biyah biyo.
Waxa kale oo aad kala saari kartaa sare caafimaad leh oo cakta ah oo xididdada.
Sida aan aragno, lobivia waa cactus soo jiidasho leh mugdiyad iyo unpretentiousness, taas oo aan ku adag tahay in ay "ku qanciso" si ubaxyada.
Isku day in aad ku degto daaqadaada "saaxiib qaali ah" - waxayna ku farxi doontaa wakhti dheer, waqti dheer.
Sharaxaad ka mid ah digaagaha Columbus: muuqaalka, dayactirka iyo daryeelka, iyo sidoo kale sawirro
Asparagus Meier: daryeelka guriga
Cusbooneysiinta strawberry "Fresco": sida loo koro hybrid beerta
Agrotechnics sii kordhaya geedo tufaaxa "Papirovka"
Xaafad miyir leh: miyuu suurtogal ah in dhirta iyo yaanyada ay ku beeri karaan isla isku-jirku isku wada mid ah iyo sida loo sameeyo?
Tan iyo markii ay ubax yihiin mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee ubaxa, dad badan ayaa doonaya in ay leeyihiin baadiyaha ah ee warshad noocan ah ee beerta ama xitaa on windowsill ah. Waxaa jira siyaabo badan oo loo soo saaro dhalashada, mid ka mid ah midka ugu fudud oo ugu caansan waa dhalashada ubax by gooyn. Si kastaba ha ahaatee, marar badan oo gooyn ah, tusaale ahaan, ka soo bouquet soo bandhigay xilliga qaboobaha, waa in lagu keydiyaa ilaa guga. Read More
Daryeelka habboon ee dhirta guriga
Kala duwanaanta noocyada kala duwan ee isdhexgalka ee tamaandhada ballanta guud - Yaanyada xasaasiga ah